ရှင်ကေတုမာလာလင်္ကာရ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှင်ကေတုမာလာလင်္ကာရ(၁၂၂၈ − ၁၃၁၀) သည် “ရတနာဘုံပျံဆရာတော်” ဟု ထင်ရှားခဲ့သည့် ကျမ်းပြုဆရာတော် ဖြစ်သည်။ 
၃ ကျမ်းများ ပြုစုခြင်း
ဆရာတော်ကို ၁၂၂၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၉ ရက်နေ့တွင် ပန်းတောင်းမြို့အပိုင် မြစိမ်းကျွန်းရွာကြီး၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ငယ်မည်မှာ မောင်အောင်ကျော် ဖြစ်သည်။ မိဘနှစ်ပါးမှာ ဦးကြာနု − ဒေါ်ကောင်းသာ ဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်အခါက ကျီးသဲမြို့ သင်္ဂဇာဆရာတော်ကြီး၏ ပညာဆွေးနွေးဖက် ဖြစ်သည့် ချောင်းဒေါင့်ဆရာတော်ထံတွင် ပညာများ သင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၂၄၇ ခုနှစ်တွင် “ရှင်ကေတုမာလာလင်္ကာရ” ဟူသည့် ဘွဲ့ဖြင့် ရဟန်းပြုခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းကျောင်းတော်ရာ ကျောင်းတိုက်၌ သီတင်းသုံးကာ ပုဇွန်တောင်နော်မံကျောင်းကြီးဆရာတော်၊ မော်လမြိုင်မြို့ သင်္ဂဇာဆရာတော်ကြီးနှင့် ဝဇီရာရာမ ဆရာတော်ကြီးတို့ထံတွင် စာပေများ သင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့သည်။ မဟာမြတ်မုနိဘုရားအမကြီး ဒေါ်ရွှေပွင့်က လျှောက်ထားသဖြင့် ရတနာဘုံမြင့်ကျောင်း၌ ၁၂၅၂ ခုနှစ်မှစ၍ ၁၂၆၂ ခုနှစ်တိုင်အောင် ၁၀ ဝါမျှ သီတင်းသုံးခဲ့သည်။
ထိုသို့ သီတင်းသုံးနေစဉ် ၁၂၅၇ ခုတွင် ပထမဆုံအကြိမ်ကျင်းပသသည့် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲကို အကျော်တန်းမှ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် မန္တလေးမြို့နှင့် စစ်ကိုင်းတောင်ရတနာဘုမ္မိချောင်သို့ ရောက်နေသည့် ဆရာရင် ဝဇီရာရာမဆရာတော်ထံတွင် ပညာများ ဆက်လက်ကာ သင်ကြားခဲ့ပြီး ဇာတိ မြစိမ်းကျွန်း၌ နှစ်ဝါမျှ သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင် ဦးညို − ဒေါ်ဒေါ်အိမ်တို့က ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သည့် ရတနာဘုံပျံကျောင်းတိုက်၌ ၁၂၆၇ ခုနှစ်မှ ၁၂၈၇ ခုနှစ်တိုင် ၂၁ ဝါပတ်လုံး စာပေများ ပို့ချခဲ့သည်။ ၁၂၈၈ ခုနှစ်တွင် မုဒုံမြို့အပိုင်၊ ဘဲ့ရမ်းရွာအနီး သဲဖြူစမ်းတောရကျောင်းသို့ ၁ ဝါမျှ ကြွရောက်ကာ သီတင်းသုံးခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ရတနာဘုံပျံကျောင်းတိုက်တွင်ပင် ဆက်လက်ကာ သီတင်းသုံးခဲ့သည်။
၁၂၉၂ ခုနှစ်တွင် “အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဘွဲ့တံဆိပ်တော်” ကပ်လှူခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၂၉၉ ခုနှစ်တွင် ကြအင်းနှင့် လောင်းကိုင်းအကြား ဒူးရင်းစမ်းတောရ၌လည်းကောင်း၊ ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၁၃၀၃ ခုနှစ်တိုင် ခေါင်းဆေးကျွန်း၌လည်းကောင်း၊ ထို့နောက်တွင် ရတနာဘုံပျံကျောင်း၌ပင် သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည်။ 
ပထမဆုံး အကျော်အောင်တော်မူခဲ့သည့် ရှင်ကေတုမာလာလင်္ကာရသည် ၁၃၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ 
ဆရာတော်သည် အောက်ပါကျမ်းများကို ရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ လှသမိန် (၁၉၆၁ ခုနှစ်). ဂန္ထဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိပေါင်းချုပ်. ၃၅၇၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ဟံသာဝတီစာအုပ်တိုက်, ၁၃၉၊ ၁၄၀။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှင်ကေတုမာလာလင်္ကာရ&oldid=453483" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ မတ် ၂၀၁၉၊ ၁၄:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။